Homeसमाचारआज नेपालमा सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नुहोस्
January 1, 2021 admin समाचार 8697
स्थानीय बजा’रमा आज पहेंलो धा’तुको मूल्य प्रतितोला रु ४०० ले उकालो लागेको छ । छापा’वाला सुन प्रतितोला रु ९४ हजार ५०० मा कारो’वार हुने गरी मूल्य नि:र्धारण भएको छ ।
प्रति’तोला रु ९४ हजार १०० मा बिही’बार कारोवार भएको छापा’वाला सुन आज भने तोला’मा रु ४०० ले उकालो लागेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महा’सङ्ले जनाएको छ । यस्तै ते’जाबी सुन प्रति’तोला रु ९४ हजारमा कारो’वार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ ।
सो सुन बि’हीबार तो’लामा रु ९३ हजार ६०० मा का’रोेवार भएको थियो । चाँदीको मूल्य भने आज पनि स्थिर छ । चाँदी तोलामा रु एक हजार ३०० मा कारोवार भ’एको छ ।
‘एटीएम’मा राखेको १२ लाख रुपैयाँ मुसाले काटेर धुजा-धुजा ब’नाएपछि…
कृष्ण कँडेल मेलम्ची पुग्दा स’र्वस्व गुमाएका बाढी पिडितहरुले थाम्न सकेनन् आँसु (हे’र्नुहोस् भिडियो)
June 18, 2021 admin समाचार 4878
अविरल वर्षा पछि ग’एको पहिरो पछी मेलम्ची नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण सिन्धुपाल्चो`कको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्र`बाट कैयौँ मानिस`हरू विस्थापित भ`एका छन । बाढी`ले सैयौ घर पुरेको छ भने खेत पुरै बगरमा परि’णत भएको छ।
सधैंको लागि अस्ताईन् लता, अधुरै रह्यो उनको यस्तो अन्तिम इच्छा !
February 6, 2022 admin समाचार 2249
भारतकी स्वर नाइटिङगेल र भारत रत्न लता मंगेशकर अब यो संसा`रमा रहिनन् । लता मंगेशकरले ९२ वर्षको उमेरमा ६ फेब्रुअरी बिहान अन्तिम सास लिइन् । लता मंगेश`कर पछिल्लो २८ दिनदेखि मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्प`तालमा भर्ना
August 27, 2021 admin समाचार 4232